Mpiaro Ny Tontolo Iainana Iray Hafa Maty Nisy Namono Tao Amazônia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2016 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, বাংলা, Português
Luiz Alberto Araújo, sekretera misahana ny tontolo iainana ao Altamira, maty voatifitra tamin'ny 13/10. Saripika: Prefeiktioran'i Altamira, nahazoana alalana.
Votoaty nosoratan'i Letícia Leite, nivoaka voalohany tao amin'ny habaky ny Ivontoerana Sosialy sy Tontolo Iainana. Navoaka teto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mpamono olona anankiroa, nitaingina môtô, no namono nahafaty an'i Luís Alberto Araújo, 54 taona, Sekreteran'ny Tontolo Iainana ao Altamira, fanjakan'i Pará tamin'ny alakamisy 13 oktobra lasa teo. Araka ny nolazain'ny polisy sivily, natao teo anatrehan'ny fianakaviany ny famonoana, raha hamonjy fodiana tao amin'ny fokontanin'i Buritis, manamorona ny tanàna ry zareo. Nandositra nankany amin'ny monisipaliten'i Brasil Novo avy eo ny mpamono olona ary tsy misy ny torohay momba azy ireo na izay nampaniraka azy ireo.
Mampitombo ny isan'ireo mpikatroka mpiaro ny tontolo iainana misy namono tao Amazônia, ahitana ny taha ambony indrindra amin'izany, izao famonoana azy izao.
Efa nisy fotoana ihany koa i Araújo no sekreteran'ny tontolo iainana tao São Felix do Xingu, mbola ao amin'ny fanjakan'i Pará ihany koa, ary tao no nitarihany fifanarahana hanomezana kadasitra ireo toeram-pambolena rehetra. Izany hoe vao maika ihany koa manaratsy ny fifandraisana amin'ireo mpitrandraka ala sy mpibodo tany samy tsy ara-dalàna, izay efa nandrahona azy.
Tao Altamira, Araújo no nitarika ny fanadiovana [fanajariana] ny tanandehibe sy nanome lisansa amin'ny fanangonam-pako. Vitany ihany koa ny nametraka kadasitra ara-tontolo iainana tany amin'ireo faritra tsy nanaiky izany hatry ny ela, niavaka tamin'ny tolona hanoherana ny fandripahana ala tafahoatra. Voamariky ny tsi-fitongilanana sy ny fahamatorana ny fitantanana nataony tamin'ny fanatanterahana ny lalàna ara-tontolo iainana.
“Namoy mpitantana iray goavana i Altamira, izay vonona hatrany hitaky ny fanajana ny fepetra ara-tontolo iainana tamin'ny fananganana ny tohodranon'i Belo Monte sy nanome fanohanana ireo mponina amorontsiraka sy ireo sokajim-piarahamonina voakasik'izany”, hoy ny fanazavan'i Rodrigo Junqueira, mpandrindra ny programa Xingu do ISA. Nanamafy i Junqueira fa tena zavadehibe ny tokony iezahan'ny governemanta federaly sy ny fanjakana [Para] hanao famotorana ity heloka bevava ity sy hanasazy ny tompon'antoka tamin'izany.
1 herinandro izayHehy
2 herinandro izayGoatemalà